Thwebula Amazon 6.4.0.100 isizulu – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Amazon
Amazon – isofthiwe nge iqoqo okuqukethwe sihluke service popular Amazon. Isofthiwe ikuvumela ukubuka futhi uthenge ezahlukene izimpahla, ezifana izimonyo, imikhiqizo abantwana, izingubo, amawashi, amakha, izincwadi, njll Amazon kwenza ukulanda izicelo noma imidlalo eselula kanye ephathekayo. Isofthiwe futhi ikuvumela ukuba uthenge isiqophi imidlalo for computer futhi udlala ezisekelweni ezahlukene. Amazon iqukethe izinhlelo eziningi ezahlukene nemidlalo, lapho ngenxa yezizathu eziningi kungukuthi posted kwamanye amasevisi.
A set of okuqukethwe ezahlukene kusukela service Amazon
Ikhono ukuthenga izimpahla ezahlukene
Download izicelo nemidlalo amadivaysi ehlukahlukene
Amazwana ku Amazon
Amazon software ehlobene
Ama-9Apps – insiza yesicelo esithandwayo enobubanzi bemikhiqizo yezinhlobo ezahlukahlukene ezitholakalayo zokulanda nokuvuselelwa ngokuzenzakalelayo kwizinguqulo zakamuva.
I-Amazon Underground – isitolo sohlelo lokusebenza esidumile esisekela imikhiqizo eminingi ehlukene kanye nokuthi kungenzeka ukulanda izinhlelo ezikhokhelwayo ngesikhathi esinqunyelwe.
I-eBay – isoftware yokuphatha insiza ethandwa kakhulu yokuthenga nokuthengisa imikhiqizo ehlukahlukene. Isoftware isebenzisa uhlelo olulula lokucinga lwezimpahla nezinsizakalo ezihlukaniswe izigaba eziningi.